काठमाडौँ, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आउनेको संख्या अत्यधिक हुँदा भीड नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यालय र पसल खुलेसँगै असार लागेदेखि नै अस्पतालमा चाप ह्वात्तै बढेको हो। कोभिड–१९को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्न भने पनि अस्पतालमै भीड नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको अस्पताल निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले बताए। ‘व्यवस्थापन गर्न असाध्यै गाह्रो भइरेहको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कुनै निर्देशन आएको छैन। मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नहुँदा व्यवस्थापन गर्न असाध्यै गाह्रो भइरेहको छ।’ अहिले दैनिक सात सयदेखि १३ सयसम्म कोरोना परीक्षणका लागि आउने गरेको उनले बताए।
अस्पतालले सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। भीड धेरै हुँदा दूरी कायम गर्न गाह्रो भएको छ। अस्पतालले आवश्यक पर्नेको मात्रै परीक्षण गरिरहेको छ। अस्पतालले संक्रमणको जोखिममा रहेका वर्ग वा संक्रमित बढी भएका स्थान वा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकालाई रातो श्रेणीमा पार्ने गरेको छ रउनीहरूको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
अस्पतालमा अहिले जोखिममा नपर्ने व्यक्ति बढी संख्यामा परीक्षणका लागि आइरहेका छन्। बन्दाबन्दी हुनासाथ काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर गएकालाई अहिले सम्बन्धित पालिका वा घरबेटीले परीक्षण गराएर मात्रै प्रवेश गर्न भनेका छन्।
कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न अस्पतालको परिसरमा भीडभाड कम गर्न प्रशासनले भनेको छ। अस्पतालमा आउनेको ट्रेसिङ गर्ने, हिस्ट्री जानकारी लिने, तापक्रम हेर्ने गरिएको छ। सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायले पनि उपत्यकाबाहिरबाट भर्खर आएकालाई परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।
अस्पतालले पहिले व्यक्तिका विवरण संकलन गरेर आवश्यकलाई मात्रै परीक्षण गर्दै आएको छ। उपत्यकाबाहिरबाट आउनेमध्ये जोखिममा रहेकाको मात्रै परीक्षण हुने गरेको छ। दैनिक २ सय ८८ जनालाई परीक्षण गर्नसक्ने अस्पतालको क्षमता छ। अस्पतालले एक दिन गरेको परीक्षणको अर्काे दिनमा रिपोर्ट दिने गरेको छ।
सरकारले केही अस्पतालबाट अत्यावश्यक परेका व्यक्तिले शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले शुक्रराज हस्पिटलको चाप कम हुने आशा गरिएको छ।
अस्पतालमा आएकामध्ये झण्डै २० देखि २५ प्रतिशतको मात्रै परीक्षण हुने गरेको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। परीक्षण आवश्यक नपर्ने बाँकी ७५ देखि ८० प्रतिशतलाई काउन्सिलिङ गरेर घर पठाइने गरेको छ। उपत्यकामा कुनै पनि पालिकाले कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न आवश्यक तयारी नगरेको डा. राजभण्डारीको आरोप छ। सबैभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि कुनै तयारी गरेको छैन। उनले भने, ‘एउटा राम्रो क्वारेन्टिनसमेत व्यवस्था भएको पाइँदैन।’
टेकु अस्पतालमा अहिले सघन उपचार कक्षमा दुई जना र आइसोलेसन सेन्टरमा २२ जना छन्। अस्पतालले केही समयपहिले मात्रै सघन उपचार कक्ष शड्ढया बढाएको थियो। अस्पतालले दिँदै आएका धेरै किसिमका सेवा वीर अस्पतालमा सारिएको छ। रेबिजविरुद्धको खोप भने यहीँबाट लगाइने गरिएको छ।